Wafti ka socda wasaaradda caafimaadka Puntland oo kormeer Shaqo maanta uga bilawday Gobolka Mudug
October 5, 2020 - Written by Editor
Gaalkacyo:-Wafti ka socda wasaaraadda caafimaadka Puntland oo uu hogaaminayo wasiir kuxigeenka wasaaradda Abdinaasir Yuusuf Xaji ayna weheliyaan agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxda caafimaad guud ayaa kormeer shaqo maanta uga bilawday gobolka Mudug.
Waftiga ayaa kormeerkooda maanta ka bilaabay xarumaha caafimaadka ee bacaadweyn waxayna xarumaha ay booqdeen ka waraysteen shaqaalaha xaalada caafimaad iyo baahiyaha ka jira. Isxog waraysi ka dib waxay la wadaageen talooyinkooda waxayna fareen inay bulshada adeega ay uhayaan laba jibaaraan ayna xasuusnaadaan in caafimaadku yahay laf dhabarka nolosha aadanaha.
Waftigaan ayaa uga sii gudbi doona degmooyinka gobolka Mudug waxayna booqan doonaan xarumaha caafimaadka iyagoona muhiimada booqashadoodu ay tahay in la ogaado adeega wasaaraddu ugu talagashay inay bulshada gaartay, hadii ay jiraan baahiyo ka jira loo dhamaytiro.
Wasaaradda ayaa qorshaynaysa inay kor uqaado wacyigalinta iyo diyaargarowga xanuuno laga yaabo inay dilaacaan marka ay da’aan roobabka, bulshadana loogala talin lahaa inay ilaaliyaan nadaafada biyaha ay cabayaan xili roobaadka.
240,471 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress